Eny tokoa, ho tonga ao amin'ny HomePod ny FullRoom amin'ny fanavaozana manaraka ny rafitrao | Avy amin'ny mac aho
Mbola kely sisa tavela ho azy HomePod eny an-dalambe am-pelatanan'ny olona ana hetsiny farany. Fantatray fa ny varotra mialoha dia tsy araka ny nantenain'izy ireo, izany hoe ho an'ireo mpandalina sy mpanaraka ny marika, satria tsy ho fantatray mihitsy raha nikasa i Apple na tsia fa ampy ny stock ka tsy lany eo amin'ny presale.
Ity mpandahateny vaovao ity dia efa manapotika ny tambajotra ary izany YouTubers izay efa afaka nanandramana azy dia manaiky fa ny feo avoakany dia mahafinaritra ary tena ho sarotra ny handresy azy. Na izany aza, hatramin'ny nanolorana azy, ny iray amin'ireo zavatra tsy hita dia ny fahafahan'ny HomePod roa hifandray hahazoana rafitra fanamafisam-peo ethereal na afaka hamboarina ka io mitovy io dia averina amina singa maromaro apetraka amin'ny efitrano samihafa amin'ny trano amin'ny alàlan'ny AirPlay 2 protocol.
Androany dia miparitaka manerana ny harato ny vaovao fa mikasa ny hampihatra ireo safidy roa ireo i Apple amin'ny fanavaozana ny lozisialy amin'ny ho avy ary ny iray amin'izy ireo dia efa voatondro anarana FullRoom. Ity fomba fiasa ity dia ahafahan'ny HomePod roa miasa toy ny rafitra audio stereo, ka hampiakatra avo roa heny ny fanitrihana ny feo.
Raha miditra amin'ny tranokala Apple natokana ho an'ny HomePod isika amin'izao fotoana izao, dia afaka mahita fa ho tonga ireo fiasa roa ireo "Taty aoriana mandritra ny taona". Ho hitantsika raha mampihatra azy ireo amin'ny fanavaozana lozisialy iray ihany i Apple na mampihatra azy ireo miandalana. Ny mazava dia ny mode FullRoom sy ilay noheverina fa fomba fiasa Multi-efitrano na izay antsoin'ny Apple azy amin'ny ho avy fa tsy fomba fiasa miasa lavitra ary maro ny mpampiasa no maniry ny hanohana ny HomePod azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Eny tokoa, ho tonga ao amin'ny HomePod ny FullRoom amin'ny fanavaozana manaraka ny rafitrao
Hatsarao ny fifamatoran'ny AirPods amin'ny sofinao amin'ity fitaovana ity